यसरी बनि ९ नम्बरकि केटी रामबहादुरकि 'कमली' | literature यसरी बनि ९ नम्बरकि केटी रामबहादुरकि 'कमली' | literature
We have 1357 guests and 206 members online
Content View Hits : 35808569
Written by Indira Prasai
Special: काठमाडौं- प्रत्येक पटक ऊ भने लुगा फुकाल्न खोजिरहन्थी । लुगाफाटो र सिगारपटार सकेपछि रामबहादुरलाई नौ नम्बरकी केटी एकदमै ठयाम्मै कमलीजस्तै लाग्यो । उस्तै गोरो अनुहार, उस्तै आखा, उस्तै ओठ, उस्तै सम्पूर्ण बनोट । 'कमली !' रामबहादुरले आखाभरि आसु पारेर त्यसलाई बोलायो । अगालोमा कसेर फेरि बोलायो 'कमली !, कमली !'
Nude Girls by Vera Richarda. Image courtesy: fineartamerica.com
'आर.बी., म एक महिनाको छुट्टी जाँदै छु, साहेबले बल्लतल्ल मान्यो । पाँच वर्षपछि जाँदै छु । तिम्रो चिठीपत्र भए पठाऊ, लगिदिन्छु तर मालसामानचै लादिन है ! अहिले भन्दिया छु । अस्तिको पल्ट तिमीहरूको सामान बोक्ने भएर उता एयरपोर्टमा लगेज भारी भएर उल्टै दण्ड पर्यो । यसपालि कसैको पनि कुनै सामानचै नलाने । साथीभाइको चिठीपत्र भने लगिदिन्छु कि कसो ।' रामचन्द्र घर जाने उत्साहमा बोल्दै थियो ।
रामचन्द्र, जसलाई यहाँ साहेबले आर.सी. भनेर बोलाउछ, त्यसैले ऊ सबैको आर.सी. हो । त्यसैगरी, आर.बी. चाहि रामबहादुर हो । साहेबले लामो नाउ बोलाउने झन्झट नगरी सबैको नाउ छोट्टयाइदिन्छ । उनीहरू तीन जना नेपालीबाहेक दुई जना भारतीय केटीहरू र चार जना बङ्गलादेशी केटाहरू पनि यहाँ छन् । भारतीय केटीहरू चन्द्रावतीलाई सी. भन्छ साहेबले र मधुमालतीलाई एम. मात्रै भन्छ । बङ्गलादेशी केटाहरू चन्द्रशेखरलाई सी.एस., गोपीकृष्णलाई जी.के., कृष्णचन्दरलाई के.सी. र कालीप्रसादलाई के.पी. भनेर साहेबले बोलाउने गर्छ । तर रामबहादुरलाई यसरी नाउ छोट्टयाएको पटक्कै मन पर्दैन र ऊचाहि आफ्ना सबै सहकर्मीलाई उनीहरूको पूरै नाउले बोलाउछ । तर उसका सहकर्मीहरू भने साहेबकै नक्कल गर्छन् र एकआपसमा साहेबले छोट्टयाएकै नाउ चलाउछन् ।
रामचन्द्रले घर जाने कुरा गर्नासाथ रामबहादुरलाई पनि आफ्नो घरको सम्झना भएर आयो । रामबहादुर घर नगएको पनि झन्डै छसात वर्षै भइसक्यो । यहाँबाट छुट्टी पाउनै गाह्रो छ । सुरुसुरुमा छुट्टी नपाएको झोकमा कहिलेकाही यो कामै छोडौ जस्तो पनि उसलाई नलागेको होइन । तर साहेब ज्यादै असल छ र रामबहादुरलाई खूबै माया गर्छ । साहेबले कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी विश्वास पनि रामबहादुरलाई नै गरेको छ । यति ठूलो फर्मको सबैजसो जिम्मा हिजोआज रामबहादुरकै हातमा छ । साहेबको विश्वासपात्र भयो भनेर उसका सहकर्मीहरू उसको ईर्ष्या पनि गर्छन् । त्यसैले यहाँको कामै छोडेर साहेबको विश्वासलाई घात पार्न पनि ऊ चाहदैन ।
रामबहादुरलाई घरै जाने पनि अब के नै आकर्षण रह्यो र ! आफूले मन पराएर बिहे गरेर घरमा छोडेर आएकी स्वास्नीले पनि पर्खिन सकिन । पाँच वर्षपछि घर जादा ऊ अर्कैकी भइसकेकी रहिछे । आमाले माया गर्थिन्, उनी पनि स्वर्गे भइसकिछन् । बाउ दाजुसँग बसेका रहेछन् । दाजुको परिवारमा भाउजूको हेरविचार र नातिनातिनाको रमझममा बाउ पनि रामबहादुरकालागि बिरानोझै भएछन् । कान्छा अब नजा परदेश, यतै बस्, घरजम गर् बाबै बाउले भन्न त भनेका थिए । तर आम्दानी गर्न नसकेको घरजम पनि दीगो हुँदैन । कमलीसँग उसले घरजम गर्न खाजेकै त हो नि । दिनरातको अभाव र गरिबीसँग आजित भएपछि कमलीकै सल्लाह मानेर ऊ परदेशिएको हो । तर कमलीले आफैले कमाउन भनेर परदेश पठाएको लोग्नेलाई पर्खन सकिन ।
रामबहादुरले त्यस बेला मनभरि कुरा खेलाए पनि बाउलाई कुनै जबाफ फर्काएको थिएन । 'कान्छा सबै उस्तै हुँदैनन्, सधै एकनास हुँदैन, आइमाई जातलाई एक्लै छोड्नु हुँदैन । आँट गर्, अब नजा, यतै बस्, म पनि बूढो भइसकें, आमाले तेरै नाउ लिदालिदै प्राण छोडी ।' रामबहादुरको मनको कुरा पढेर बाउले भनेका थिए । तर उसले बाउले भनेझै गरेन । 'एकपल्ट पुगेर आउँछु बा !' उसले यति मात्रै भनेको थियो । "बाका कुरा पनि ठीकै हुन् कान्छा, अब नजा, यतै मिलीजुली काम गरौँला ।" दाइले पनि भनेका थिए । तर रामबहादुरले दाजुको हिजोको व्यवहार बिर्सन सकेको छैन । दाजु र भाउजूले उसले कमाएन भनेर त्यस बेला अर्घेलो गरेको उसले कसरी बिर्सोस् ! अझ रामबहादुरले कमलीलाई बिहे गरेपछि दाजुले सगोलमा बस्न पनि रुचाएका थिएनन् र त्यसपछि दाजुकै आग्रहमा परिवार दुई टुक्रा भएको थियो । दाजुले कुलो पनि लाग्ने र राम्रो उब्जाउ हुने खेतजति आफ्ना भागमा पारेर रूखो र कुलो नलाग्ने खेत उसको भागमा पारिदिएका थिए । त्यसपछि बाउआमा पाल्ने जिम्मा पनि रामबहादुरलाईलगाएर दाजु पन्सिएका थिए ।
कुनै इलम नभएको रामबहादुर वर्षदनमै साहूको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको थियो । 'अब परदेश नगई अर्को उपाय छैन' कमली र उसले सल्लाह गरेका थिए । त्यसपछि खेतजति जम्मै साहूलाई जिम्मा लाएर दलाललाई पैसा खुवाएपछि रामबहादुरले परदेशमा जागिरको मुख देखेको थियो ।
परदेशिएको अर्को वर्षेदेखि रामबहादुरले बाउको नाउमा पैसा पठाउन थालेको थियो । बाउको नाउमा पैसाको बिटो देखेपछि भाउजूको बुद्धि फर्केको थियो । बूढाबूढीलाई एकोहोर्याएर कमलीलाई पोइल हिडाउने जुक्ति पनि भाउजूकै थियो । कमलीलाई टिक्न नदिएपछि उनीहरूले बूढाबूढीलाई स्याहार्न आफ्नै घरमा पुर्याएका थिए । त्यसपछि रामबहादुरले पठाएको सबै पैसा दाजुकै हातमा पर्न थालेको थियो । त्यसैले आफ्नो दाजुको माया कतिसम्म गहिरो छ भन्ने कुरा रामबहादुरले राम्ररी बुझेको थियो । उसले पैसा कमाउन छोडेको भोलिपल्ट उसका दाजुभाउजूले उसलाई नचिन्न पनि बेर लाउदैनन् । त्यसैले छदाखादैको त्यस्तो राम्रो काम छोडेर बाउदाजुका कुरा मान्नु रामबहादुरलाई पटक्कै ठीक लागेन । त्यसैले चाडै र्फर्किनेछु भनेर ऊ पुनः विदेशिएको थियो ।
रामबहादुर फर्किएको छ महिनामै सेतो धागोले बेरिएको चिठी उसको नाउमा आएको थियो । बाउ बितेछन् । उसले आफूले जानेको किरिया यही बसेरै बार्यो । परदेशमा नियम त कसरी पुर्याओस्, तै बाउलाई बिदा गर्यो । बाउको देहान्तपछि अब नेपालै रित्तो लाग्यो उसलाई । त्यसैले पनि ऊ घर गएको छैन । किन जाने ! कसका लागि जाने ! ढुङ्गा र माटोबाहेक नेपालमा अर्थोक के छ र उसको । ढुङ्गा र माटो त यहाँ पनि छ । एकै पेटको दाजुको माया उसले कमाएको पैसासँग मात्र छ । बरु यही देशको साहेबले उसलाई बिरामी पर्दा पनि स्याहारेको छ ।
यहाँ आएकै साल फुड प्वाइजन भएर ऊ झन्डै खुस्केको थियो । त्यस दिन दुईचार चोटि दिसाबान्ता हुदा पनि उसले खासै वास्ता गरेन र आफ्नो नियमित काम गरिरहेको थियो । अचानक उसलाई तारन्तारको दिसाबान्ताले छोपेको थियो । मधुमालतीले आत्तिएर तुरुन्तै साहेबलाई खबर गरेकी थिई । त्यस बेला साहेब हावाको गतिमा आइपुगेको थियो र हतारहतार उसलाई गाडीमा हालेर अस्पताल पुर्याएको थियो । आधा घण्टाको बाटोमा रामबहादुरले गोडा तीनचारेकपल्ट गाडीमै दिसा र बान्ता गरेको थियो । झन्डै बेहोसजस्तो अवस्थाको रामबहादुरलाई साहेबको गाडी खराब गरेको भन्नेचाहि सम्झना थियो तर ऊ यति शिथिल भइसकेको थियो कि त्यस बेला आफ्नै शरीर उसको वशमा थिएन ।
तपाईंले फोहोर पारेको गाडी साहेबले सबै आफै सफा गरे नि आर.बी. दाइ ! पछि मधुमालतीले सुनाएकी थिई । भारतीय केटी मधुमालतीले साहेबको ड्राइभर नेपाली केटो हर्कबहादुरसँग बिहे गरेकी छ । मधुमालती र हर्के साहेबले दिएको साहेबकै घरसँग टासिएको क्वार्टरमा बस्छन् । रामबहादुरलाई अस्पतालमा तीन दिनसम्म सलाइन चढाएर राखिएको थियो । अस्पतालबाट साहेबले रामबहादुरलाई आफ्नै घरमा लगेको थियो । साहेबले आफ्नो कोठाकै छेउको कोठामा रामबहादुरलाई राखेर रामबहादुरको जम्मै हेरविचार आफैले गरेको थियो । साहेबको स्याहारसुसारले एक हप्तामा रामबहादुर तङ्ग्रिएर तन्दुरुस्त पनि भएको थियो । त्यसपछि मात्र साहेबले रामबहादुरलाई उसैको कोठामा फर्किन दिएको थियो । मानिसलाई मानिसले जित्ने भनेकै सद्व्यवहारले रहेछ । त्यस बेलाको साहेबको व्यवहारले गर्दा रामबहादुरका लागि साहेब भन्नु उसको जिउदो भगवान्जत्तिकै भएको छ ।
वास्तवमा यो परचक्री भूमि पनि उसकालागि आफ्नो मातृभूमिभन्दा प्रिय भएको साहेबकै मायाले हो । उसलाई सम्झदा पनि अचम्म लाग्छ, साहेब उसको भाषा बुझदैन र ऊ पनि साहेबको भाषा बुझदैन । मानिसले मानिसलाई माया गर्न भाषा पनि नचाहिने रहेछ । आफ्नाहरूका माझ ऊ बिरानो भइसकेको छ र बिरानो साहेबले उसलाई मायाजालमा हालिसकेको छ ।
रामबहादुरको साहेब वैज्ञानिक हो । हुन त ऊ डाक्टर हो तर उसले कहिले पनि डाक्टरी काम गरेर बिरामी जाचेन । उसलाई केटाकेटीदेखि नै आविष्कार र अनुसन्धानमा रुचि थियो । त्यसैले डाक्टरी विद्या पढेर पनि ऊ अनुसन्धानमा नै लागिरह्ययो । त्यसैले आज उसलाई सबैले वैज्ञानिक भनेर नै चिन्छन् । त्यसो त साहेबले आफ्नो आविष्कारलाई अहिले व्यापारमा परिणत गरिसकेको छ । अरबपति बाबुआमाको एक्लो छोरो हो साहेब । त्यसैले पैसा कमाउने कुरा उसले कहिल्यै सोचेन । नयाँनयाँ काम गर्ने मात्रै लहड थियो साहेबको । गोरा साहेबहरूको उमेर त थाहा पाइदैन, तर दस वर्षअघि रामबहादुर यहाँ आउँदाको साहेब र अहिलेको साहेबको उमेर विचार गर्दा साहेबको उमेर साठी वर्ष नाघिसकेको जस्तो लाग्छ उसलाई । रामबहादुरको सहकर्मी बङ्गलादेशबाट आएको कृष्णचन्दरचाहि अङ्ग्रेजी भाषा राम्रै जान्दछ । उसैले साहेबका बारेमा लेखिएको किताब पढेर साहेबका बारेमा लेखिएका यी सबै कुरा रामबहादुरलाई भनेको हो । कृष्णचन्दरले सुनाएअनुसार उसको साहेबले बिहे पनि गरेको छैन र उसको घरपरिवारमा पनि कोही छैनन्।
साहेबको यो फर्म सहरबाट निकै नै टाढा छ । यहाँबाट मोटरमा आधा घण्टाको बाटोमा एउटा सानोसानो गाउ छ । तर यो फर्मको वरिपरि भने कतै पनि कुनै घर छैन । झन्डै नौ सय एकडजति जमिनलाई अग्लो पर्खाल लगाएर घेरिएको छ । एउटा ठूलो मूल द्वार छ । त्यहाँ हरहमेसा ताला लाग्ने गर्छ र त्यो तालाको साचो साहेबसँग मात्रै छ । यहाँ काम गर्ने विदेशीबाहेकका कर्मचारी बाह्र जना त्यहीका स्थानीय जातिका मानिसहरू छन् । ती किसानहरू अङ्ग्रेजी जान्दैनन्, उनीहरू आफ्नै भाषामा बोलीचाली गर्छन् । त्यसैले रामबहादुर र उसका साथीहरूसँग ती किसानहरूको कुनै कुराकानी हुदैन । कृष्णचन्दरले नै पत्तो लाएअनुसार ती किसान पनि त्यहाँका सुकुमबासी हुन् र त्यही परिसरमा साहेबले दिएको घरजग्गाबाहेक उनीहरूको अन्त कतै जाने ठाउ पनि छैन । उनीहरूले त्यस जमिनमा खनजोत गर्ने, तरकारी, फलफूल रोप्ने र स्याहार्ने काम गर्छन् । यहाँ हरेक मौसमका तरकारीहरू र फलफूलहरू पर्याप्त फल्छन् । साहेबको आफ्नै निजी हेलिकोप्टर पनि यही कम्पाउन्डको बीचभागमा राखिन्छ । कृष्णचन्दरकै भनाइअनुसार अस्पतालहरूमा आफ्नो उत्पादन पुर्याउने काममा साहेब यही हेलिकोप्टर प्रयोग गर्छ । पहिलो पटक यहाँ भित्रिदा त्यस ठाउमा एउटा अनौठो संसार देखेर रामबहादुर छक्क परेको थियो । चारैतिरको निर्जन एकान्त पार गरेपछि एउटा अर्कै संसारमा प्रवेश गरेको अनुभूति रामबहादुरलाई भएको थियो। एक किसिमको डरजस्तो पनि र अनौठोअनौठो, केटाकेटीमा आमाले सुनाएको दन्त्यकथाको सहरमा आइपुगेजस्तो अनुभूति पनि भएको थियो उसलाई ।
जब पहिलो दिन रामबहादुर कोठामा पुगेको थियो, यहाँका मानिसहरू देखेर अचम्म परेको थियो । यहाँका हरेक कोठामा दसबाह्र जनाको सङ्ख्यामा नाङ्गा मानिसहरू थिए । कुनै कोठामा लोग्नेमानिस मात्रै, कुनै कोठामा आइमाई मात्रै र कुनैकुनै कोठामा लोग्नेमानिस र आइमाई दुवै थिए । 'ए यो त जेलखाना पो रहेछ' उसले त्यस बेला मनमनै ठानेको थियो । 'भो यस्तो जेलखानामा त काम नगर्ने' उसले तत्काल निर्णयगरेको थियो । त्यस बेला उसलाई कृष्णचन्दरले नै त्यहाँ पुर्याएको थियो । नेपालमा जुन दलाललाई उसले पैसा तिरेको थियो त्यो त अब त्यहाँ थिएन । त्यसैले उसले कृष्णचन्दरलाई नै आफ्नो मनको कुरा टुटेफुटेको हिन्दीमा भन्यो । कृष्णचन्दर हिन्दी कुरा गर्थ्यो र अङ्ग्रेजी जान्दथ्यो । त्यसैले ऊ नै साहेब र विदेशी कामदारका बीचको भाषासाघु बनेको थियो । अब तिमीले एक वर्षत यहाँ काम गर्नै पर्छ, तिम्रो मालिकले तिम्रो एक वर्षको पैसा त लगिसक्यो । कृष्णचन्दरले रामबहादुरको निर्णयको जबाफ दिएको थियो । यो मानिस बनाउने फ्याक्टरी हो, जेल होइन । यी मानिसहरू हाम्रो साहेबले मेसिनले बनाएको हो । यिनीहरू मानिसजस्ता मानिस नै हुन् तर यिनले मानिसका कुरा बुझदैनन् । यी हेर्दा मानिस भए पनि पूरै मानिस भने होइनन् । कृष्णचन्दरले रामबहादुरको मनको भाषा पढेर यो जानकारी दिएको थियो ।
'यस्ता मानिस साहेबले किन बनाएको हो, के काम ! फेरि यिनीहरूलाई किन लुगा नदिएको !' राम बहादुरले नाङ्गा मानिसहरूलाई हेर्न नसकेर भनेको थियो । 'यिनीहरू लुगा लगाउन मन पराउदैनन्, लुगा लगाइदियो भने च्यातिदिन्छन्' कृष्णचन्दरले भनेको थियो । 'अहिले संसारका जुनसुकै देशमा पनि यी मानिसको माग छ । हाम्रो साहेबबाहेक संसारमा कसैले पनि यस्ता मानिसको उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यहाँ कोही पनि बाहिरको मानिस आउन पाउदैन र यहाँका हामी कामदार पनि घरीघरी बाहिर जान पाउँदैनौं ।' यसको मूल ढोकाको साचो त्यसैले साहेबसँग मात्रै छ । त्यसै दिन कृष्णचन्दरले भनेको थियो ।
'यी मानिसहरूमध्ये कसैको मृगौला, कसैको मुटु, कसैको आखा, कसैको हात वा खुट्टा बिक्री हुन्छन् । आजकल संसारका मानिसहरूका कुनै न कुनै अङ्गमा रोग लागेर ती अङ्ग फेर्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ । त्यस्ता फेर्नुपर्ने अङ्गकालागि साहेबले यी मानिसहरू उत्पादन गरेको हो ।' कृष्णचन्दरले आफूले जानेका धेरैजसो जानकारी त्यसै दिन रामबहादुरलाई सुनाएको थियो ।
'यी मानिसहरूमध्ये कसैको आखाको भाग बलियो छ, कसैका हातखुट्टा, कसैको टाउको, कसैको पाठेघर, कसैको मृगौला र कसैको मुटु । साहेबले त्यसैअनुसार यिनीहरूलाई अलगअलग कोठामा राखेको हो । यहाँ राखिएका मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा पुराना पाँच वर्षका भए । म यहाँ आएको आठ वर्षभयो । पहिलो पटक उत्पादन गरिएका सबै मानिस मरे । कुनै हिसाबमा गडबढी भयो भनेर त्यस बेला साहेब निकै मुर्मुरिएको थियो ।' कृष्णचन्दर रामबहादुरलाई सबै कोठा घुमाउदै थियो र आफूले जानेका कुरा भन्दै पनि थियो । 'यो कोठामा हामीले पस्नु हुन्न, यहाँ मानिसको बीउ भर्खरै राखिएको छ । सहरमा मानिसको वीर्यको पनि ब्याङ्क छ रे, त्यहाँबाट साहेबले मानिसको वीर्य किनेर ल्याउछ । उ ती सिसाका भाडा छन् नि, यसलाई साहेबले मदर भन्छ । हो ती भाडामा एक वर्षपछि मानिसका बच्चा देखा पर्छन् । यो कोठामा साहेब मात्रै बेलाबेलामा पस्ने गर्छ र ती भाडामा कुनै औषधी हाल्ने गर्छ ।' कृष्णचन्दरले बीचभागमा भएको एउटा कोठाको सिसाको ढोकाअगाडि पुगेपछि भनेको थियो । 'यो कोठाचाहि अपरेसन गर्ने कोठा हो । साहेबले संसारका कुनै पनि अस्पतालबाट माग भएअनुरूपका अङ्गहरू काटेर उसैले बनाएको खास किसिमको बट्टामा ती अङ्गहरू प्याकिङ गर्छ । त्यस्ता अङ्गहरू प्याकिङ गरेको ४८ घण्टाभित्र मानिसमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ ।'
'योचाहि काम नलाग्ने मानिस पेल्ने कोठा हो' कृष्णचन्दरले त्यसै घरको पल्ला छेउको एउटा कोठाअघिल्तिर पुगेपछि भनेको थियो । कोठाको ढोका बन्द थियो तर सिसाको ढोकाबाट भित्रको दृश्य छयाङ्गै देखिन्थ्यो । त्यहाँ भित्र एउटा कालो रङ्गको ठूलो मेसिन थियो र जुन चिम्नीको आकारले कोठाको छतमा टासिएको थियो । 'कुनैकुनै मानिसको कुनै पनि अङ्ग काम नलाग्ने हुन्छ, त्यस्ता मानिसलाई पाल्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता मानिसलाई पहिले मृत्युको सुई दिइन्छ र त्यसपछि त्यो निर्जीव भइसकेको मानिसलाई यो चिम्नीमा हालिन्छ र त्यो बिजुलीको स्विच अन गरेपछि केहीबेरमै त्यो खरानी हुन्छ ।' कृष्णचन्दरका कुरा सुनेर रामबहादुरको अनुहारमा भयका चिन्नहरू प्रकट भएका थिए । 'डराउनु पर्दैन, तिमीहामीलाई साहेबले यसमा हाल्दैन । उसैले बनाएका फाल्तू मानिस मात्रै हाल्छ । कहिलेकाही कुनैकुनै मानिस मर्छ पनि, त्यस्तो बेलाका लागि मात्रै हो यो । फेरि सबै अङ्गप्रत्यङ्ग प्रत्यारोपणका लागि झिकिएपछि काम नलाग्ने भएर बाकी भएका भाग पनि यसै मेसिनमा हालेर पेलिन्छ । यसलाई इन्सिनेटर भनिन्छ ।' कृष्णचन्दरले रामबहादुरलाई ढाडमा धाप मार्दै आश्वस्त पार्न खोजेको थियो ।
त्यस दिन रामबहादुरलाई फर्म हाउसका सबै कोठा र उसले गर्नुपर्ने काम पनि अराएपछि कृष्णचन्दर आफ्नो काममा लागेको थियो । तर रामबहादुरलाई भने कस्तोकस्तो भइरह्यो, दिगमिग लागिरह्यो र एक किसिमको डर पनि लागिरह्यो । रामबहादुरको जिम्मामा ती मानिसहरूलाई खाना खान दिने र उनीहरू बस्ने कोठा सफा पारिदिनुपर्ने थियो। ती मानिसहरूलाई खान एक किसिमको दाना दिइन्थ्यो । कुखुराले खाने दानाजस्तै किसिमको दाना उनीहरूलाई एउटा ठूलो प्लास्टिकको आरीमा हाल्दिनुपथ्र्यो र पानीचाहि प्लास्टिकका सिसीहरूमा भरेर राखिदिनुपथ्र्यो । प्रत्येक कोठामा सगै गासिएका शौचालय थिए र ती मानिसहरू शौचालयको कमोड प्रयोग गर्थे । कमोड प्रयोग गर्ने ती मानिसहरू फ्लस गर्न जान्दैनथे । त्यसैले हरेक पटक रामबहादुरले नै त्यहाँ पुगेर फ्लस गरिदिनुपथ्र्यो । रामबहादुरले इसारा गर्नासाथ ती मानिसहरू शौचालयमा प्रवेश गर्थे र उसले धारा खोलिदिन्थ्यो । झर्नाको पानीमा तिनीहरू केहीबेर नुहाउथे । हप्तामा एक दिन साबुनको फोहोरा पनि खोलिदिनुपथ्र्यो । जसले गर्दा उनीहरू सफासुग्घर देखिन्थे । रामबहादुरकालागि काम गाह्रो थिएन तर यस्तो अचम्मको र कहिल्यै सपनामा पनि नचिताएको काम गर्न भने उसलाई पटक्कै मन लागेको थिएन । 'ठीकै छ एक वर्षत बस्नै पर्यो, त्यसपछि अर्कै काम गर्नुपर्ला' बाध्य भएर रामबहादुरले निर्णय गरेको थियो ।
कोठा नम्बर तीनमा केटीहरू मात्रै राखिएका थिए । प्रत्येक केटीका ढाडमा नम्बर टासिएको थियो । तिनीहरूमध्ये नौ नम्बरकी चाहि रामबहादुरलाई असाध्यै राम्री लाग्थी । आफ्नी कमलीको शरीर पनि उज्यालोमा सम्पूर्ण नदेखेको रामबहादुर सुरुसुरुमा निर्वस्त्र आइमाईका शरीर देखेर लाजले भुतुक्क हुन्थ्यो । पाँच वर्षका केटीहरू पनि अठारबीस वर्षका जस्ता तरुनी थिए ।
Image courtesy: thehairpin.com
'यी मानिस विकासे कुखुराजस्तै हुन् आर.बी. । यिनको बुद्धि र तागत हुँदैन । त्यसैले यी छिटोछिटो बढ्छन् रे ।' रामबहादुरको जिज्ञासाको जबाफ कृष्णचन्दरले नै दिएको थियो । यी कृत्रिम मानिस हुन् भन्ने जानेरै पनि नौ नम्बरकी केटीलाई देख्नासाथ रामबहादुरलाई भने कमलीको सम्झनाले आक्रान्त पार्थ्यो । छोटो समयसम्म भए पनि कमलीसँग भोगेको सुखको सम्झनाले उसलाई गाल्थ्यो । त्यसैले सबै कोठाको काम सक्नासाथ रामबहादुर तीन नम्बर कोठामा पुग्थ्यो र घण्टौसम्म नौ नम्बरकी केटीलाई हेरेर बस्थ्यो । पहिलेपहिले नाङ्गा मानिसहरू हेर्न नसकेर आखा चिम्लिने रामबहादुरलाई पछिपछि नाङ्गा मानिसहरू हेर्ने अभ्यास भएको थियो । 'बुझयौ आर.बी., साहेबले उसको किताबमा गजबको कुरा लेखेको छ ? प्रकृतिले बनाएका कुनै पनि जीवले कपडा लगाउदैनन् । मानिसले पनि कपडा लगाउन आवश्यक नै थिएन । सुरुमा एउटा मानिसले गरेको गल्तीका कारण मानिसले कपडा लगाउनुपरेको हो । मानिसको वास्तविक सुन्दरता नै कपडाले छोप्छ । संसारमा त्यसैले जीवजन्तुले यौनअपराध गरेको सुनिदैन तर असङ्ख्य मानिसहरू यौनअपराधमा संलग्न छन् । यो सबै मानिसले कपडा लगाएकाले भएको भन्ने उसको मान्यता छ ।' कृष्णचन्दरले एक दिन साहेबले लेखेको किताब पढेर रामबहादुरलाई अर्थ्याएको थियो । साहेबका कुरा ठीकबेठीक ठहर गर्ने क्षमता रामबहादुरसँग थिएन तर नौ नम्बरकी केटीको सुन्दरतामा मोहित रामबहादुर दिनप्रतिदिन त्यस केटीप्रति लालयितसमेत भने हुँदै गएको थियो ।
'यो पनि त मानिस नै हो, साहेबसँग यो केटी माग्नुपर्यो, बरु पैसा जति परे पनि तलबबाट कटाऊ भन्नुपर्यो । आखिर साहेबले बेच्ने नै भएपछि कसो मलाई नदेला र !' धेरै दिनपछि एक दिन रामबहादुरले निर्णयगरेको थियो ।
हिजोआज रहँदाबस्दा साहेब र उसका बीचमा सामान्य संवादकालागि कृष्णचन्दर नचाहिने भइसकेको थियो । साहेब प्रत्येक दिन बिहान सबेरै र बेलुकी गरेर दुई पटक फर्म हाउस घुम्न आउँथ्यो । त्यस दिन बिहान रामबहादुरले साहेबलाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने निधो गर्यो । साहेबले एक नम्बर घुम्यो, दुई नम्बर पनि घुम्यो र तीन नम्बर कोठामा साहेब पस्यो । रामबहादुरको मुटु ढक्क भयो, तर पनि उसले आज साहेबसामु आफ्नो माग राख्ने नै निर्णयगरिसकेको थियो । 'साहेब !' रामबहादुर नौ नम्बरकी आइमाईको अघि पुगेर उभियो । 'के भयो यसलाई ?' साहेबले आफ्नो भाषामा सोध्यो । 'होइन, यसलाई होइन, यो मलाई' रामबहादुर अकमकायो र आफ्नो कुरा राम्ररी भन्नै सकेन । 'हँ, के भयो यसलाई ?' साहेबले आफ्नो घाटीमा झुन्डिरहेको स्टेथोस्कोपले नौ नम्बरकी केटीलाई जाँच्न थाल्यो । साहेब, मलाई यो राम्री लाग्छे रामबहादुरले दह्रो भएर भन्यो । 'अँ, यो राम्री छ, मलाई पनि राम्री लाग्छ' साहेबले नौ नम्बरकी केटीको शरीर र टाउकोसमेत सुमसुम्याउदै त्यसका गालामा च्वाप्प म्वाइ खायो । रामबहादुरलाई त्यसरी साहेबले नौ नम्बरकीलाई सुमसुम्याएको र चुम्बन गरेको पटक्कै मन परेन ।
'साहेब, यसको पैसा मेरो तलबबाट काट्नुहोस् र यो मलाई दिनुहोस् ।' रामबहादुरले साहेबको मुखमा हेर्दैनहेरी कठोर भएर हतारहतार भनेको थियो । 'तिमी के गर्ने, यसको त पाठेघर मात्रै राम्रो छ, तिमीलाई काम लाग्दैन आर.बी. ।' साहेबले छक्क परेर रामबहादुरलाई हेर्दै भनेको थियो ।
'म योसँग बिहे गर्छु साहेब, यो मेरी स्वास्नी कमलीजस्तै छ ।' रामबहादुरले रुन्चे स्वरमा भनेको थियो ।
'तिमी लैजाऊ, तर यो स्वास्नी हुँदैन, मैले झूटा कुरा गरेको होइन । तिमी मेरो कुरा पत्याउँदैनौ होइन ? ल, लैजाऊ यसलाई ।' साहेबले नौ नम्बरकी आइमाईका पाखुरा समातेर त्यसलाई रामबहादुरतिर ल्याइदियो । त्यसको ढाडमा टासेको नौ नम्बर पनि झिकिदियो । 'आर.बी., म तिमीसँग पैसा लिदिन तर तिमीलाई मन नपरे भोलि नै ल्याइदेऊ । तिमीले यसलाई क्वार्टरमा लैजादा यसको खाना पनिसगै लिएर जाऊ । यसले तिम्रो खाना खान सक्तिन । यसको स्वास्थ्यको हिसाबले पनि यसलाई यहाँको हावापानीबाहेकको प्राकृतिक हावापानीले बिगार्ने सम्भावना छ । एकैछिन पख, म यसलाई एउटा सुई लगाइदिन्छु, यो कोठाबाट बाहिर लैजादा यसलाई यो सुई लगाउनु पर्छ । बाह्र घण्टामा फेरि लगाउनुपर्छ' साहेबले भनेको थियो । साहेबले भनेझै नौ नम्बरकी केटीलाई झट्टै उसले एउटा सुई लाइदियो ।
त्यस दिन आफ्नो सबै काम सकेपछि नौ नम्बरकी केटीलाई लिएर रामबहादुर आफ्नो क्वार्टरमा पुगेको थियो । परदेशिएको एक्लो रामबहादुरलाई आज यतिका वर्षपछि उत्साह र उमङ्गले खपिनसक्नु भएको थियो । नौ नम्बरकीको नाउ उसले कमली नै राख्ने निर्णयगरेको थियो । एउटी कमली गुमाए पनि आज अर्की कमली पाउँदा उसको हर्षको सीमै थिएन ।
क्वार्टरमा पुगेपछि रामबहादुरले आफ्नो बाकसबाट सारी, चोलो र पेटीकोट निकालेको थियो । कमलीकालागि किनेका यी सामान बोकेर नेपाल जाँदा कमलीसँग भेट नभएपछि उसले फाल्न पनि सकेको थिएन । कमलीकैलागि त्यसै बेला किनिएका लालीपाउडर र क्रिम पनि थियो उसको बाकसमा । उसले सबै कुरा पालैपालो नौ नम्बरकी केटी अर्थात् ऊद्वारा नामकरण गरिएकी कमलीलाई लगाइदियो । कमली चुपचाप बसिरही । शरीरमा लुगा परेपछि भने ऊ केही छटपटाई र लुगा खोल्ने प्रयत्नमा लागी । तर रामबहादुरले उसलाई इसारा गरेर लुगा लगाइरहन लगायो । प्रत्येक पटक ऊ भने लुगा फुकाल्न खोजिरहन्थी । लुगाफाटो र सिगारपटार सकेपछि रामबहादुरलाई नौ नम्बरकी केटी एकदमै ठयाम्मै कमलीजस्तै लाग्यो । उस्तै गोरो अनुहार, उस्तै आखा, उस्तै ओठ, उस्तै सम्पूर्ण बनोट । 'कमली !' रामबहादुरले आखाभरि आसु पारेर त्यसलाई बोलायो । अगालोमा कसेर फेरि बोलायो 'कमली !, कमली !'
ऊ भोकाइहोली भनेर रामबहादुरले सगै ल्याएको दाना दियो । उसले कपाकप खाई । बोतलमा पानी पनि दियो, घटघट पिई । यतिका वर्षपछिको सुन्दरीको संसर्गले रामबहादुरलाई स्त्रीनशाले छोपिसकेको थियो । त्यसैले त्यसपछि उसले आफूले कमलीका रूपमा सिगारेकी केटीका कपडा खोलिदियो । कपडा खोलिदिदा त्यो केटी खुसी भई । त्यसपछि उसले त्यो केटीलाई नरनारीको भोगकालागि तयार गर्न खोज्यो । तर त्यो त भावशून्य थिई । उसले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाइन । भावावेशमा रामबहादुरले आफूलाई पूर्ण पुरुषमा रूपान्तरित गर्यो तर त्यो भने आइमाई हुँदैभइन । एउटा ढुङ्गाजस्तो चिसो शरीरसँग खेल्दाखेल्दै रामबहादुर आफै शिथिल भयो । त्यो आइमाईसँग आइमाईको जस्तै शरीर थियो तर त्यो आइमाई भने थिइन । उसले जति नै प्रयत्न गर्दा पनि त्यो आइमाई नै भइन । र, आखिरमा रामबहादुर हार्यो । त्यो आइमाई केहीबेरमै निदाएकी थिई र रामबहादुर त्यही निदाएकी आइमाईलाई हेर्दै रोइरह्यो ।
भोलिपल्ट बिहान साहेब फर्म हाउसमा आइपुग्नुअघि नै रामबहादुरले तीन नम्बर कोठामा त्यो आइमाईलाई पुर्याएर त्यसका ढाडमा नौ नम्बरको प्याच टाँसिदिएको थियो ।
-Indira Prasai in Kathmandu
Indira Prasai. Photo courtesy: Indira Prasai